Onye na -eme ihe nkiri na ihe nkiri nlegharị anya ọhụrụ maka isi obodo UAE
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Onye na -eme ihe nkiri na ihe nkiri nlegharị anya ọhụrụ maka isi obodo UAE
John Cena esorola ngalaba nke Culture na Tourism Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) na-arụkọ ọrụ maka mgbasa ozi njem nlegharị anya ọhụrụ ya, na-agba ndị njem ume ka ha debanye aha njem na isi obodo - "stat."
N'ịgbaso vidiyo teaser ahụ ewepụtara n'izu gara aga, ihe nkiri zuru ezu ewepụtara taa na-ahụ Cena na-ahapụ atụmatụ njem ya mgbe ọ gụchara banyere Abu Dhabi na ụgbọ elu ya - na-egosipụta kpọmkwem ihe kpatara oge ugbu a iji gaa. N'ịbanye n'ụzọ nkịtị n'ime ihe niile ebe a ga-enye, Cena na-esi n'ụgbọelu pụta wee daa n'elu ụlọ nke Louvre Abu Dhabi. Vidiyo ahụ na-egosi nlele anya nnụnụ maka njem Cena gafere na ọmarịcha ala Abu Dhabi, ihe nkiri ụwa na ebe ntụrụndụ akụkọ ifo.
Ebe anwụ na-acha n'afọ niile na ebe zuru oke maka anwụ oyi, Abu Dhabi na-enye ụwa n'otu ebe - dị mma maka ndị njem na-achọ ịwagharị njem ha ma mepụta ncheta ọhụrụ. Site na ịkwọ ụgbọ mmiri n'ọzara ruo n'ịgbagharị n'akụkụ osimiri ya mara mma, na-ewere ọnọdụ nka na omenala ya dị egwu na nke oge a, ma ọ bụ ịgagharị n'ọtụtụ ebe ntụrụndụ ezinụlọ na ogige ntụrụndụ - enwere ike ịchọta ụwa n'oge njem na Abu Dhabi. .
E wepụtala ihe nkiri a na-esote ọkwa na Abu Dhabi na-anabata ndị njem mba ụwa niile gbara ọgwụ mgbochi na ndị si mba Green List laghachi na Emirate, na-enweghị mkpa iche.